Graton - तपाइँको सोनोमा काउन्टी छुट्टी को सबैभन्दा बाहिर कसरी बनाउने
यसलाई सामना गरौं, तपाइँ एक छुट्टी को लागी ढिलो गरीरहनुभएको छ। तपाइँ तपाइँको झोलाहरु प्याक गरीएको छ र तपाइँ सोनोमा काउन्टी को प्रस्ताव छ कि सबै अनुभव गर्न को लागी तैयार हुनुहुन्छ। तर तपाइँ तपाइँको यात्रा कार्यक्रम मा के राख्नु पर्छ? हामीलाई लाग्छ कि हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं। यहाँ घटनाहरु, गतिविधिहरु, स्थानहरु, र अनुभवहरु को एक सूची बनाउन को लागी तपाइँ आफ्नो सोनोमा काउन्टी वाइन देश बिदा को सबैभन्दा बनाउन को लागी एक सूची हो!
यात्रा शरीर मा साँच्चै गाह्रो हुन सक्छ र कहिले काहिँ तपाइँ ती kinks बाहिर काम गर्न को लागी तपाइँ दिन वा साँझ को लागी तपाइँको योजनाहरु मा कूद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ यसलाई एक मा लिप्त को लागी एक प्राथमिकता बनाउनु पर्छ स्पा र सैलून यदि तपाइँसँग मौका छ भने दिन। हाम्रो समुदाय अनुभवी टीमहरु र सुन्दर सुविधाहरु संग केहि शानदार retreats को घर हो। एक स्थानीय स्रोत बाट खनिज स्नान मा डुब्न, एक भाप कोठा वा redwood सुख्खा सौना मा detox, एक खुट्टा reflexology सत्र छ, र त्यो राम्रो लायक मणि pedi पाउनुहोस् तपाइँ निर्दोष महसुस गर्न को लागी। यदि तपाइँ कहाँ जान को बारे मा अनिश्चित हुनुहुन्छ, तपाइँ हामी संग आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाइँलाई सन्तुलित महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्छौं के गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
बोडेगा खाडी विश्वव्यापी रूपमा यसको लुभावनी सुन्दर समुद्र तट दृश्यहरु को लागी प्रसिद्ध छ। लोकप्रिय गतिविधिहरु मनोरञ्जन सर्फ पोल माछा मार्ने, crabbing, कयाकिंग, birdwatching, र बालुवा मा सूर्यास्त टहल्न शामिल छन्। आगन्तुकहरु सबै ठाउँ बाट आउन र तातो गर्मी को मौसम बाट बच्न को लागी आउँछन् (ps। पानी धेरै चिसो छ, तपाइँ पहिलो मा एक औंला डुबाउनु पर्छ)।
रमाईलो र मनोरन्जन
यदि तपाइँ एक सानो साहसी प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सोनोमा काउन्टी गतिविधिहरु को एक विस्तृत श्रृंखला हो कि तपाइँको बाल्टी सूची मा सम्भव छ प्रदान गर्दछ। तपाइँ एक Sonoma तातो एयर गुब्बारा यात्रा वा Norcal स्काइडाइभिंग अनुभव को लागी आकाशमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं Muir वुड्स राष्ट्रिय स्मारक मा विशाल Redwoods को बीचमा हिड्न सक्नुहुन्छ कि समय को परीक्षा खडा छ। वा, सायद तपाइँ सफारी पश्चिम मा देश को एक मात्र वन्यजीव सफारी को एक भ्रमण संग जंगली पक्ष मा एक पैदल यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ। गेमिंग पक्ष मा, हामी तपाइँको ख्याल राख्न खुसी छौं! हामीसँग हजारौं छन् क्यासिनो खेल छनौट गर्न को लागी यदि तपाइँ कार्य मा प्राप्त गर्न र तपाइँको भाग्य को परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाइँ दाखबारी को लागी एक यात्रा बिना एक शराब देश छुट्टी हुन सक्दैन। Sonoma काउन्टी एक आश्चर्यजनक 400 वाइनरी र गिनती समेटेको छ। आगन्तुकहरु Veraison को समयमा यात्रा गर्न को लागी प्रोत्साहित गरिन्छ; वर्षको समय जब अंगूर जीवन्त हरियो को रंगहरु बाट बोल्ड बैजनी रंग परिवर्तन गर्न शुरू हुन्छ। छनौट गर्न को लागी धेरै गुणहरु संग, तपाइँ ताजा दबाईएको अंगूर को मीठो गन्ध संग घेरिएको छ कि उठाईयो र देश भर मा बेचेको हस्ताक्षर वाइन बनाउन को लागी तैयार छ। हाम्रो मनपर्ने कि हामी स्टक मा छ केहि स्थानीय Sonoma वाइनरीज कि तपाइँ केन्डल जैक्सन वाइन एस्टेट र बगैंचा, Matanzas क्रीक वाइनरी, रोबल्डो परिवार वाइनरी, र फ्रान्सिस फोर्ड Coppola वाइनरी सहित सुन्नुभएको हुन सक्छ।
Sonoma काउन्टी भोजन विकल्पहरु को एक किस्म संग यस संसार बाट बाहिर आशीर्वाद छ! यदि तपाइँ साँच्चै आफ्नो तालु कृपया गर्न चाहानुहुन्छ, सोनोमा काउन्टी भोजनालय हप्ता को समयमा एक यात्रा अनुसूची। यो घटना धेरै राम्रो पाक प्रतिभा र खाना रचनाहरु को एक सामूहिक हो कि हाम्रो समुदाय लाई प्रस्ताव गर्न को लागी छ। अर्को विकल्प सोनोमा काउन्टी किसान बजार को एक जहाँ तपाइँ सोनोमा काउन्टी कृषि समुदाय द्वारा उत्पादित सबै भन्दा राम्रो व्यवहार को केहि नमूना गर्न सक्नुहुन्छ भ्रमण गर्न को लागी हो। ला कटोरा र रोटी बाट हाम्रा साथीहरु मा स्थित छ दैनिक ग्रिल यहाँ Graton मा स्थानीय सामग्री संग ताजा बनेको वस्तुहरु सेवा गर्न सक्षम हुन आभारी छन्। यदि तपाइँ तपाइँको राम्रो भोजन को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी केहि खोज्दै हुनुहुन्छ, टोनी उत्तरी समुद्र तट को र 630 पार्क स्टीकहाउस तपाइँको अपेक्षाहरु लाई पार गर्न को लागी तयार छन्।
लक्जरी मा रहनुहोस्
Sonoma काउन्टी बस्ने ठाउँहरु को कुनै कमी छैन। चाहे तपाइँ एक ओछ्यान र नाश्ता, रिसोर्ट, वा यहाँ सम्म कि शिविर को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइँलाई केहि समस्या छ कि तपाइँको शैली फिट हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्दैन। यदि तपाइँ सबै भन्दा राम्रो चारैतिर अनुभव को लागी देख्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नै AAA® चार हीरा पुरस्कार विजेता रिसोर्ट मा हाम्रो प्रीमियम राजा वा डबल क्वीन कोठा मा हाम्रो पूल, स्पा सैलून र फिटनेस केन्द्र जस्ता विलासी सुविधाहरु को उपयोग संग रिसोर्ट मा बुकिंग मा विचार गर्नुहोस्। । हाम्रोमा रहनु होटल न केवल धेरै गतिविधिहरु र रिसोर्ट भित्र बाट उपलब्ध राम्रो भोजन विकल्प को भत्ता छ, तर हामी पनि केन्द्रीय Sonoma काउन्टी मा धेरै अन्य गतिविधिहरु को लागी स्थित छ, यातायात सरल बनाउन।
जहाँ पनी तपाइँको योजनाहरु तपाइँ हामी संग तपाइँको समय को समयमा नेतृत्व, हाम्रा साथीहरु र परिवार तपाइँ सोनोमा काउन्टी एक गन्तव्य भगदड बनाउँछ को सबै भन्दा राम्रो देखाउन निश्चित हुनेछ। Graton प्रस्ताव छ के बारे मा अधिक जानकारी को लागी, तपाइँको मनपर्ने सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म मा हामीलाई पछ्याउन निश्चित गर्नुहोस्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ भ्रमण गर्न को लागी प्रेरित हुनुभएको छ र हामी तपाइँलाई चाँडै देख्न को लागी पर्खन सक्दैनौं!
Graton छुट्टी उपहार गाइड
तपाईको सपरका लागि सबै मार्गनिर्देशकहरू। उच्च गुणको कपडा ब्रान्डबाट शानदार सुगन्ध, र अधिक! […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton छुट्टी उपहार गाइड